ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ပြန်ချိန် နီးပြီလား ~ Htet Aung Kyaw
12:46 AM Htet Aung Kyaw No comments
Friday, June 19, 2015. The Voice Daily.
မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ဟာ နုိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့ World Refugee Day ဖြစ်ပါတယ်။ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်အေဂျင်စီရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ လူပေါင်း သန်း ၅၀ ကျော်ဟာ နုိုင်ငံတကာမှာ ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီထဲက အများစုဟာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေဆဲ အာဖရိကနဲ့ အရှေ့အလယ်ပုိုင်း ဒေသက လူတွေပါ။
ဒါပေမယ့် စစ်ပွဲတွေ လက်စမသတ်နုိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာလည်း ဒုက္ခသည်ဦးရေက ၅ သိန်း ကနေ တသန်းအကြားရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခသည်အများဆုံး အာဆီယံ နုိုင်ငံ၊ ဒါမှမဟုတ် အခုချိန်ထိ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေဆဲ၊ ဒုက္ခသည်တွေတုိုးနေဆဲ တခုတည်းသော အာဆီယံ နုိုင်ငံလုို့လည်း ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။
UNHCR မြန်မာရုံးခွဲရဲ့စာရင်းတွေအရ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပုိုင်းနဲ့ ရခုိုင်ပြည်နယ် ၃ ခုမှာ UNHCR က အကူညီပေးထားတဲ့ IDP ခေါ် ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် ၂ သိန်း ၄ သောင်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ တခါ မြန်မာနုိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဒေသ (ကရင်ပြည်နယ်) မှာလည်း နောက်ထပ် IDP ၂ သိန်း ၃ သောင်း ကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်း ၂ ခုတည်းတင် ၄ သိန်း ၇ သောင်း သို့မဟုတ် ၅ သိန်းနီးပါးရှိနေပါပြီ။
UNHCR ရဲ့ အကူညီမရဘဲ တောတောင်တွေထဲ ပုန်းအောင်းနေရသူ ဘယ်လောက်ကျန်နေဦးမလဲ မသိနုိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကချင်စစ်ပွဲ၊ ကုိုးကန့်စစ်ပွဲတွေကြောင့် တရုတ်နုိုင်ငံဖက်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကလည်း အခုချိန်ထိ အိမ်မပြန်နုိုင်ကြသေးပါ။ အဲဒီစာရင်းကလည်း သောင်းနဲ့ချီရှိနေဆဲလို့ ယူဆရတယ်။
ဒါက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး စစ်ဖက်ကနေအရပ်ဖက်ပြောင်းလာပါတယ်ဆုိုတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးမှ ထပ်တုိုးလာတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ ထုိုင်းနယ်စပ် ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်အသစ်တွေပါ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမတုိုင်မီ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက် တုိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထုိုင်းနယ်မြေထဲ ထွက်ပြေး ခဲ့ကြရပြီး အဲဒိမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ၃၀ နီးပါး နေ-နေရတဲ့ အခြေချ ဒုက္ခသည် Refugee ကလည်း တသိန်း နှစ်သောင်းကျော် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနုိုင်ငံထဲမှာလည်း ရခုိုင်ပြည်နယ် ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ အခြေချဒုက္ခသည် Refugee ကလည်း သုံးသောင်းကျော် ကျန်နေဆဲပါ။
စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နုိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကြောင့်ဖြစ်စေ ကုိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုစုိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် မူလနုိုင်ငံ သို့မဟုတ် မူလနေထုိုင်ရာအိမ်ယာကနေ ထွက်ပြေးလာရသူကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်ခေါ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အဓိပါယ်ဖွင့်ထားပါတယ်။
(ထန်ဟင်း စခန်းမှာတွေ့ရတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်များ) ဓာတ်ပုံ-HAK
တကမ္ဘာလုံးအတုိုင်းအတာနဲ့ဆုိုရင် Refugee သတ်မှတ်ခံထားရသူ သန်း ၅၀ ကျော်ရှိနေပြီး အဲဓီထဲက အများစုဟာ အရှေ့အလယ်ပုိုင်းကဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ စာရင်းတွေအရ ဆီရီးယားနဲ့ အာဖဂန်ဟာ ဒုက္ခသည် အများဆုံးထွက်တဲ့နေရာဖြစ်နေပြီး တူရကီနဲ့ ပါကစ္စတန်ဟာ ဒုက္ခသည်အများဆုံး လက်ခံထားတဲ့ နုိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆုိုပါတယ်။ ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် တသိန်း ခုနှစ်သိန်း တူရကီမှာခုံလှုံနေရပြီး အာဖဂန်ဒုက္ခသည် တသန်းခြောက်သိန်းက ပါကစ္စတန်မှာခုံလှုံနေရပါတယ်။
ဒါက စစ်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာရတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုပြောတာပါ။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာတော့ စစ်ပွဲကြောင့် ပြေးရသူအပြင် နုိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကြောင့် ပြေးရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ကတော့ အခု ကချင်၊ ရှမ်း-မြောက်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ IDP ၄ သိန်းခန့်ဟာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့။ အဲဒီစခန်းတွေကိုကျော်ပြီး ထုိုင်းနယ်မြေထဲရောက်သွားသူတွေက နုိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Refugee တွေပါ။ ဒါက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်။
နုိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်ကတော့ အစိုးရကိုဝေဖန်မှုနဲ့ထောင်ခဏခဏကျလုို့ ပြည်ပထွက်လာသူတွေ၊ လက်နက် ကုိုင် တော်လှန်ရေးထဲပါခဲ့ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လုို့မရတဲ့သူတွေ များပါတယ်။ ဒီလူတွေအများစုဟာ ထုိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေဆီကနေတဆင့် တတိယ နုိုင်ငံတွေဆီရောက်ကုန်ကြပါပြီ။
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကြောင့်ပြေးရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုတလောလူပြောများနေတဲ့ ရုိုဟင်ဂျာ သုို့မဟုတ် ဘင်္ဂလီတွေဟာ ဒီစာရင်းထဲမှာပါတယ်လို့ နုိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ထောက်ပြ ထားပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ပြသာနာနောက်ပုိုင်း IDP စခန်းသွင်းထားရတဲ့ ရုိုဟင်ဂျာဦးရေ သိန်းနဲ့ချီရှိနေ ပါတယ်။ ဒီထဲက တချို့ဟာ ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီး ထုိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒုိုနီးရှားနုိုင်ငံတွေဆီ လှေနဲ့ထွက်ပြေး ကြတဲ့အတွက် လှေစီးပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် လူသိများလာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီလူတွေဟာ မြန်မာအစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အမည် ဘင်္ဂလီ ဆုိုတာကို လက်မခံပဲ ရုိုဟင်ဂျာ ဆုိုပြီး တင်းခံနေတာကြောင့် ရုိုဟင်ဂျာ ၈ သိန်းကျော်ဟာ နုိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံထားရ၊ သုို့မဟုတ် နုိုင်ငံမဲ့တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလူတွေဟာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Refugee တွေဖြစ်တယ်လို့ နုိုင်ငံတကာဖက်က မြင်ထားပါတယ်။
အငြင်းပွါးဖွယ်ဖြစ်နေဆဲ ရခုိုင်ဖက်က ရုိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စရင်းကုိုချန်ထားပြီးပြော ရင်တောင် ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် IDP ၅ သိန်းလောက်နဲ့ ပြည်ပဒုက္ခသည် Refugee တသိန်းကျော်ရှိပါ တယ်။ ဒီလူတွေထဲက ပြည်ပဒုက္ခသည်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ထုိုင်းနယ်စပ်တလျောက်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ က လူတွေကို တတိယ နုိုင်ငံမှာ၊ ချမ်းသာတဲ့ အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာ အခြေချနေထုိုင်နုိုင်ရေးအတွက် UNHCR ကနေ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ စစ်ပွဲတွေရပ်စပြုပြီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတစုံတရာရလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တတိယ နုိုင်ငံသွားရေးအစား ကိုယ်အိမ်ကုိုယ်ပြန်ရေးဖက် ဦးစားပေးကြဖုို့ နှိုးဆော်မှုတွေ ထွက်လာနေပါပြီ။ ကုိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ် အိမ်ပြန်သူတွေလည်း အနည်းအကျဉ်းရှိလာနေပြီလုို့ UNHCR ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေကြား မာရသွန်ခရီးရှည်အဖြစ် ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ သုို့မဟုတ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ သက်ဆုိုင်ရာ ၂ ဖက် တပ်တွေအတွက် အရေးကြီးသလုို ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် IDP နဲ့ ပြည်ပဒုက္ခည် Refugee ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်လည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။
(အခုလ အစောပုိုင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လောခီးလာ ညီလာခံ) ဓာတ်ပုံ- KIC
စစ်ပွဲတွေမပြီးဆုံးသေးသမျှ ဒီလူတွေ အိမ်ပြန်ဖုို့မဖြစ်နုိုင်သေးပါ။ တရုတ်နယ်စပ်ဖက်မှာ အခုမှ တုိုက်ပွဲ တွေပြန်ဖြစ်လုို့ IDP စခန်းတွေပေါ်လာတယ်ဆုိုပေမဲ့ ထုိုင်းနယ်စပ်တလျောက်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိနေ တာကတော့ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံအပြီး ကျောင်းသားတွေ နယ်စပ်မရောက်ခင် ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ၀န်းကျင်ကတည်းက ဒီစခန်းတွေစရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေ သူတွေ၊ ဒီစခန်းမှာပဲမွေးပြီး ဒီစခန်းမှာပဲကြီး သူတွေက မျိုးဆက် ၂ ခုစာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူတွေ အိမ်ပြန်ပုို့ဖုို့ဆုိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်၊ နှစ် ၃၀ လောက် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေလာသူတွေ ဆုိုတော့ သူတုို့ ရဲ့မူလအိမ် ဘယ်မှာရှိမှန်းတောင် မသိနုိုင်တော့။ ဆုိုလုိုတာက ‘’စစ်ပွဲတွေရပ်ပြီ၊ မင်းတုို့ အိမ်ပြန်လုို့ရပြီ’’ ဆုိုပြီး ပြောလုိုက်ရုံနဲ့မရ။ ဒီလူတွေအိမ်ပြန်နုိုင်ဖို့ အိမ်သစ်ရာသစ်၊ ရွာသစ်၊ မြို့သစ်တွေကုိုပါ တည်ဆောက်ပေးဖုို့လုိုနေပါတယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကူညီရုံတင်မက ပြန်လည်နေရာချထားရေး အတွက်ပါ ကူညီဖို့လုိုအပ်နေပါတယ်။
ဒီလုိုအကူညီပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ စတင်နုိုင်ဖို့အတွက် အစုိုးရနဲ့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက် ကုိုင်အဖွဲ့တွေ ကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ တိကျတဲ့အဖြေတခုခု အရင်ဆုံးထွက်လာဖုို့လုိုနေပါတယ်။ အခုတော့ နှစ်ဖက် သဘောတူထားတဲ့ မူကြမ်းကို လက်မှတ်ထုိုးနုိုင်ဖုို့ ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လွန်လာပြီး မျှော်လင့်ချက် တွေ တဖြေးဖြေးနည်းလာနေပါတယ်။ ဒါဟာ တုိုင်းရင်းသားတွေဖက်က သဘောတူညီချက်မူကြမ်း NCA ကို ပြန်ပြင်မယ်ပြောတဲ့အတွက် နောက်နှေးနေရတာပါဆုိုပြီး အစိုးရဖက်က အပြစ်တင်နေပါတယ်။
ဒီလုိုအပြန်အလှန်အပြစ်တင်နေစဉ် မနေ့တနေ့ပဲ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်အပါဝင် ဒေတချို့မှာ KIA ကချင် တပ်နဲ့ အစိုးရတပ်အကြား တုိုက်ပွဲသစ်တွေ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေ ရာနဲ့ချီ ထပ်ထွက်ပြေးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
တခါ ကုိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA) က တဖက်သတ်အပစ်ရပ်တယ်လုို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ အစိုးရတပ်တွေက သူတုို့ စခန်းကို လာတုိုက်လုို့ဆုိုပြီး လောက်ကုိုင်ဒေသမှာ တုိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ တခါ တအောင်းတပ် ဖွဲ့ TNLA၊ ရခုိုင် တပ်မတော် AA တုို့နဲ့လည်း တုိုက်ပွဲတွေက ကြိုကြားဖြစ်နေဆဲပါ။
ဒီ ၄ ဖွဲ့စလုံးနဲ့ ဒီလုိုတုိုက်နေတဲ့အပြင် တချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့ ၀-တပ်ဖွဲ့ (UWSA) နဲ့ အစိုးရတပ်တွေကြား အခြေအနေတွေ တင်းမာလာတာ၊ အစိုးရလက်အောက်ခံ ပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ UWSA အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ် တဲ့အထိ အခြေနေတွေဆုိုးဝါးလာနေပါတယ်။ အဓိပါယ်ကတော့ NCA (တနုိုင်ငံလုံးအတုိုင်းအတာနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူ ညီချက်) စာချုပ် ချုပ်နုိုင်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါ။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ မဖြစ်နုိုင်တော့ပါ။ တစုံတရာတည်ငြိမ်လာတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံအရှေ့တောင်ဒေသ (ကယား၊ ကရင်၊ မွန်နဲ့ တနသာင်္ရီ) က ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည် IDPကို ကျေးရွာသစ်တွေမှာ နေရာချပေးတာမျိုး အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာ နုိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကချင်နဲ့ ရှမ်း-မြောက်ဖက်က အခြေအနေကတော့ မသေချာလှပါ။
(ထန်ဟင်စခန်းမှာတွေ့ရတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည် မိသားစုတခု) ဓာတ်ပုံ-HAK
တခါ ထုိုင်းနယ်စပ်တလျောက်မှာ တုိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့အတွက် ထုိုင်းနယ်မြေထဲရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ က Refugee တွေကို အိမ်ပြန်ပို့ရေးအစီစဉ်လည်း လာမဲ့အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ စကောင်း စလာနုိုင်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် IDP တွေကို အရင်နေရာချပြီးမှ ပြည်ပကလူတွေကိစ္စကုို စဉ်းစားနုိုင်မှာမုို့ ဒါလည်း ကြာဦးမှာပါ။
ဒါက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိစ္စ။ စစ်ပြေးဆုိုတဲ့အတုိုင်း စစ်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးဆုိုရင် ဒီလူတွေလည်း ပြေး စရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။ အစိုးရနဲ့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေအကြား သဘောတူညီချက် တစုံတရာရတာနဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကိစ္စက တဖြေးဖြေးနဲ့ပြေလည်သွားနုိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၂ ခုကြား တုိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ လူမျိုးစုတခုနဲ့တခုအကြား၊ ဘာသာရေး တခုနဲ့ တခုအကြား သဘောထားမတုိုက်ဆုိုင်လုို့၊ တုိုက်ခုိုက်မိလုို့ ထွက်ပြေးလာရသူတွေကိစ္စကတော့ စစ်ပွဲကိစ္စထက် ပုိုမုိုရှုတ်ထွေး၊ ပုိုမုိုနူးညံ့စွာ ကုိုင်တွယ်ဖုို့ လုိုမယ်ထင်မိပါတယ်။
အခုချိန်ထိတော့ ဒီကိစ္စကို အသေအချာကုိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာ၊ ဖြေရှင်းဖုို့ စတင်ကြိုးစားတာမျိုးတောင် မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ပြသာနာတွေဖြစ်ကာစက ရခုိုင်ပဋိပက္ခစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာ နာမည်ကြီး နုိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့ပေးခဲ့ပေမဲ့ အခုဘာအသံမှမကြားရတော့ပါ။ တခါ (MPC) မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာကလဲ လက်နက်ကုိုင်ပဋိပက္ခပြေ လည်ရေးတခုတည်းကိုပဲဦးစားပေးနေပြီး ရခုိုင်ဖက်က ပြသာနာတွေ ပြေလည်ရေးအတွက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းတာ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတာမျိုး မတွေ့မိသေးပါ။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ပြန်ရေးဆုိုတာဟာ စစ်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးလာ တဲ့သူတွေ ချည်းမဟုတ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ တခြားအရေးတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသူတွေ အားလုံး အိမ်ပြန်နုိုင်ရေးအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လုိုပါတယ်။ ဒီလုိုဖြစ်လာစေဖုို့အတွက် တုိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်တဲ့အပြင် တနုိုင်ငံလုံးရှိ နုိုင်ငံသားတုိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ နေနုိုင်တဲ့ အခြေနေတရပ် ရောက်လာသည်အထိ ၀ုိုင်းကြိုးစားဖို့လုိုနေပါကြောင်း တုိုက်တွန်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။ ။